शिवकुमार काशी मनहरी/जैसिङ–डिल्लीपुर । निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमा अबरोध आएपछि मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष बाधा फुकाउन वन विभाग पुगेका छन् । बुधवार दिउँसो मनहरी निकुञ्ज विभाग पुगेर गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज
भारतबाट भन्दा चीनबाट हुने आयातमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा आयात भन्दा निर्यात उच्च दरले बढ्ने देखिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बढेको लागत र आयातमुखि व्यापारका कारण पछिल्लो समय भारत र चीनबाट आयात हुने
फागुन २६ गतेसम्म आयोजना हुँदै गरेको मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा
देवराज पन्त, मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबारदेखि फगुन २६ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको मेलाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको जनाएको छ । संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि मेलाको सम्पूर्ण तयारी
अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसदमा प्रस्तुत
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५’
आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायले गर्ने
काठमाडौं, फागुन १४ । हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको आगम्छे मन्दिरको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायमार्फत् गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा उपभोक्ता समितिमार्फत् मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय
देशभर दूध र तरकारी भण्डारण गृह स्थापना हुने
काठमाडौँ । देशभर दूध र तरकारीको बजार वस्थापन गर्नका लागि भण्डारण गृह र संकलन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । कृषकहरुले दुध र तरकारी उत्पादन गरेपनि बजार व्यवस्थापन नभएपछि उनीहरु
अलैचीले बजार नपाएपछि किसान मारमा
दीपक भट्ट, रामेछाप–१३ फागुन । रामेछापको उच्च लेकाली भु–भागका किसानहरुले लगाएको अलैचीले यस वर्ष भाउ नपाउँदा किसानहरुले गुन्द्रुकको भाउँमा अलैची विक्री–वितरण गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । विगत वर्षहरुमा प्रति केजी
सुपर दोर्दी–खले भने १६ करोड ३० लाखमै जलविद्युत आयोजना बन्दै
काठमाडौं । सरकारी आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट ५२ करोडसम्म पुग्दा लमजुङमा निर्माणाधिन ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख ले भने १६ करोडमै आयोजना बनाउँदै छ । तर सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्नतन देखिदैन ।
काठमाडौं । होटलमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेकोछ । दुईवर्षमा स्वदेशी लगानीकर्ताले एक खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गरेका छन् । सबैभन्दा बढी चार तारे होटल खोल्न बढी लगानी भित्रिएको छ